Shandisa Google Karenda Kuronga Microsoft Matimu Misangano
Inoshamisa Kutamba kubva kuMicrosoft
Microsoft yakaburitsa chinowedzera-kubvumira vashandisi veGoogle Chalenda kuti vagadzire nekushandisa misangano yeMicrosoft Matimu mu Google Workspace Musika. Kubva pazera remashoko, zvinoita sekunge yekuwedzera kwave kuwanikwa kubvira kupera kwaNovember. Nekudaro, Microsoft haisi kutaura zvakawandisa pamusoro wenyaya uye chete trace yemapepa andinogona kuwana pane yavo saiti inovhara kugadzirisa iyo-on yekushandisa neGoogle Workspace. Dzakasiyana shanduro dzekuwedzera-dzinowanikwa kuGoogle Workspace uye Google Calendar (mutengi). Kusina mukana weGoogle Workspace, ini ndakatora musiyano wevatengi wekuyedza kukwira.
Mushure mekuisa kodhi kubva kumusika, iyo yekuwedzera-inobvumidza vashandisi kuronga misangano yetimu kubva kukarenda yavo yeGoogle. Mune pfungwa, iyo yekuwedzera-yeGoogle Chalenda inoshanda zvakanyanya senge iyo Mapoka emusangano anowedzera-mune yeiyo Outlook desktop, OWA, uye Outlook nhare inoita.
Sechikamu chegadziriro yekumisikidza, unofanirwa kusimbisa kune yako Teams maroja maroja uchishandisa yako Microsoft 365 account. Kana iwe ukasabatanidza iyo yekuwedzera kune inoshanda Microsoft 365 account yakapihwa marezenisi ekushandisa Matimu, haugone kutarisira kugadzira maTeam misangano.
Kugadzira Matimu Musangano neGoogle Chalenda
Kugadzira musangano wemaTimu neGoogle khalendari zviri nyore. Gadzira musangano semazuva ese wobva wasarudza kuve nemaTeam ekugadzira inodiwa nzvimbo yekushandira pamhepo kuitisa musangano. Izvi zvinoitwa nekusarudza Matimu semugadziri wemusangano wevhidhiyo wakabatana sezvakaratidzwa muMufananidzo 1. Sarudza Microsoft Matimu musangano kubva pane yekudonhedza-pasi runyorwa rweanowanikwa vhidhiyo yemisangano vanopa kana kudzvanya iyo Wedzera Musangano wemaTimu eMicrosoft bhatani. Vaviri vanoita zvakafanana uye vanowedzera URL inonongedzera kumusangano wemaTimu kuchiitiko chekarenda.
Mufananidzo 1 Wedzera
Mufananidzo 1: Kuronga musangano mutsva kubva kuGoogle Calendar (mufananidzo wechikwereti: Tony Redmond)
Iyo URL yemusangano wemaTimu inotarisa chakadai. Iyo yekunongedzera kune yepamhepo nzvimbo yekushandira iyo ichabata musangano wemaTimu iri pachena:
Wedzera iyo yekukoka runyorwa uye zadzisa iyo yasara yeruzivo yemusangano (Mufananidzo 2). Unogona kukoka vamwe vashandisi veGmail neGoogle Workspace, vanhu vane maakaundi pane mamwe maemail system, uye vashandisi veHofisi 365.
Mufananidzo 2 Wedzera
Mufananidzo 2: Kuronga musangano wemaTimu kubva kuGoogle Calendar (mufananidzo wechikwereti: Tony Redmond)
Paunochengeta chiitiko, iwe unobvunzwa kana iwe uchida kutumira mamemo. Ita kudaro uye Karenda inotumira mamiririri eemail kunongedzo yevakakokwa. Kukoka kunosanganisira kujoinha mirairo muchimiro chechimwe chinyorwa uye URL yekupinda musangano wepamhepo (Mufananidzo 3).
Mufananidzo 3 Wedzera
Mufananidzo 3: Kukokwa kubva kuGoogle Chalenda nemusangano wemaTimu (mufananidzo wechikwereti: Tony Redmond)
Mhinduro kumisangano yekukoka inoyerera pasina dambudziko pakati peGoogle Calendar uye Shanduko.
Kwete MAPI Properties
Vashandisi veAptlook vanogona kugamuchira musangano uye vobva vauwedzera kune avo makarenda. Nekudaro, Outlook inobata zviitiko izvi semisangano yakajairwa nekuti iyo MAPI zvivakwa zvinoratidzira pamhepo Matimu (uye Skype yeBhizinesi) misangano havapo. Kupotsa a Join Online bhatani muyeuchidzo yeAptlook yekuti musangano wave kuda kutanga kunetsekana kudiki.
Matimu Misangano kubva kuGmail
Kubata kwakanaka ndekwekuti misangano yetimu yakarongwa kuburikidza neyekuwedzera-inosvikika kuburikidza neKarenda yekuona muGmail (Mufananidzo 4). Kuti ubatanidze musangano kubva kuGmail, vhura chiitiko uye tinya iyo Joinha Microsoft Matimu Musangano kubatana.
Mufananidzo 4 Wedzera
Mufananidzo 4: Misangano yetimu yakanyorwa mukendendende yeGmail (mufananidzo wechikwereti: Tony Redmond)
Saizvozvowo, kana uchishanda mukati meKarenda, iyo yekuwedzera-pamazita Matimu musangano wezuva rakasarudzwa (Mufananidzo 5).
Mufananidzo 5 Wedzera
Mufananidzo 5: Misangano yetimu yakanyorwa muGoogle Calendar (mufananidzo wechikwereti: Tony Redmond)
Iyo Gmail account ine iyo karenda yakanyorwa seye Mapoka musangano musangano. Zviitiko zvakagadzirwa ne-yekuwedzera hazvisi zvinowedzerwa kune iyo khalendari yeakaunganidzwa Microsoft 365 account. Kana iwe uchida kuti iyo account iende kumisangano yakarongedzwa kuburikidza neGoogle Calendar, iwe unofanirwa kuwedzera iyo account semunhu aripo. Izvi zvinogadzira dambudziko rinonakidza. Zvese zvinoshanda zvakanaka kana musangano ukatangwa neakaundi account kubva kuGmail kana Karenda. Kana zvisiri uye mutemo wemaTeam wekusangana wakapihwa account yakabatana yeMicrosoft 365 haibvumire chero munhu kunze kwemurongi kudarika nzvimbo yekutandarira, kunyangwe iyo Microsoft yakabatana account inogona kujoina.
Kununura musangano wemaTimu kuwedzera-kuGoogle Calendar inzira inonakidza pachikamu cheMicrosoft. Kune rimwe divi, Microsoft yaizonyanya kuda vashandisi kuti vave neExchange Online mailbox sezvo vagara vachitaura kuti kusangana uku kunopa akanakisa uye asina musono mashandiro. Icho ichokwadi ichokwadi, asi ikozvino Microsoft iri kuvhura Matimu misangano kumusoro kune vashandisi veGoogle email senge yakanangana neGoogle Sangana. Zvinoita sekunge kuda kweTimu kupararira kwese kwese hakuna miganho.
The post Shandisa Google Karenda Kuronga Microsoft Matimu Misangano yakatanga kutanga Petri.
New Teams maapplication anoita kuti misangano yako ibudirire uye iite
Maitiro ekugadzira musangano wakarongwa kana wepapo muMicrosoft Teams
Matimu Anotarisa Zvemunhu Zvimiro zveDesktop uye Bhurawuza Vatengi